फुटपछि फेरि जुट्यो राप्रपा « Loktantrapost
फुटपछि फेरि जुट्यो राप्रपा
२८ फाल्गुन २०७६, बुधबार २०:१०
झापा । राप्रपा र राप्रपा संयुक्तबीच फेरि एकता भएको छ । राजधानीको राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित एक समारोहमार्फत दुई पार्टीबीच एकता घोषणा गरिएको हो ।
शनिबार दुई पार्टीबीच एकता गर्नेगरी १० बुँदे समझदारी भएसँगै बुधबार औपचारिक कार्यक्रम गरी पार्टी एकता घोषणा गरिएको हो । एकता घोषणा समारोहमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, राप्रपा संयुक्तका अध्यक्षद्वय पशुपति शमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दलगायतका नेता कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको छ ।
दुई पार्टीबीच एकता घोषणा भएपछि एकीकृत पार्टीको नाम राप्रपा नै हुनेछ भने पार्टीको झण्डा गाई र चुनाव चिन्हको सम्बन्धमा भने पछि निर्णय लिइनेछ । यस्तै, पार्टीको एजेण्डा राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र हुनेछ ।
पूर्वपञ्चहरुको बाहुल्य रहेको दुई राप्रपा २०७३ मङ्सिरमा एकीकृत भएपछि फेरि फुट्न पुगेका थिए । त्यसयता दुई पार्टीबीच एकताका लागि पटक–पटक छलफल भएपनि भाँडिँदै आएको थियो । २०७३ मङ्सिरमा हलो चिन्ह भएको तत्कालीन राप्रपा र गाई चिन्ह भएको राप्रपा नेपाल मिलेर एकीकृत राप्रपा गठन भएको थियो ।
सो एकता प्रक्रियापछि राणा, थापा, लोहनीसहित लोकेन्द्रबहादुर चन्दसम्मका पञ्चायतकालीन पृष्ठभूमिका हस्तीहरु एकठाउँमा हुन पुगेका थिए । तर, सो एकताको ८ महिनामै पार्टी छिन्नभिन्न त भयो नै कमल थापालाई एकता हुनुअघि भन्दा पनि बढी क्षति पुगेको थियो । त्यतिबेला पनि एकीकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह गाई हुने निर्णय भएपछि बिवाद फुटसम्मको अवस्थामा पुगेको हो ।
२०७४ भदौमा पार्टी फुटाउँदा राणाले थापा निकटकै सांसद र केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । त्यसअघि नै पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको कार्यशैलीको विरोध गर्दै प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि पार्टी परित्याग गरेर राप्रपा राष्ट्रवादी बनाएका थिए । फुटकै कारण राप्रपालाई गत चुनावमा ठूलो झट्का लागेको थियो । राप्रपाको प्रतिनिधिसभामा एक सिटमात्रै रहेको छ ।
गीता छोएर पार्टी नफुटाउने कसम
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले हिन्दूहरुको आस्थाको केन्द्र भगवान पशुपतिनाथलाई साक्षी राखेर अब पार्टी नफुटाउने कसम खाएका छन् । उनले सो कसम खाँदा मञ्चमा राखिएको ‘भागवात गीता’ पुस्तक समेत छोएका थिए ।
यसअघि नेताहरुकै कारण पार्टी पटक–पटक फुटेको भन्दै अब पार्टी नफुटाउन माग नेता कार्यकर्ताले गरेका थिए । राष्ट्रियसभा गृहमा बुधबार आयोजित राप्रपा र राप्रपा संयुक्तको एकीकरण समारोहमा राप्रपा काठमाडौंका जिल्ला सचिव हरिप्रसाद अघिकारी पार्टी नफुटाउने कसम खान माग गर्दै गीता बोकेर मञ्चमा पुगेका थिए । सो क्रममा कार्यक्रम हलमा केहीबेर तनाव समेत हुन पुगेको थियो ।
कार्यकर्ताको माग र चाहनाअनुसार कमल थापाले आफ्नो सम्बोधनको सुरुमै भगवान पशुपतिनाथलाई साक्षी राखी गीता छुँदै आफूले पार्टी नफुटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले आफू कुनै पनि हालतमा पार्टी फुटाउने पक्षमा नरहेको भन्दै अन्य दुई अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि पार्टी फुटाउने पक्षमा नरहेको बताए । आफूहरुको उमेरको कारणले पनि अब त्यो अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले पार्टी एकताको आजको दिन कोषेढुङ्गा सावित उनले दाबी गर्दै पार्टी निर्माणमा विगतमा संस्थापक नेता स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाले खेलेको भूमिकाको पनि प्रशंसा गरे । थापाले पार्टी एकताबाट आफू खुसी र सन्तुष्ट रहेको बताउँदै आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै पार्टी एकता गराउन सकेकोमा गौरवान्वित भएको पनि धारणा राखे ।
पूर्वमन्त्रीद्वारा एकीकरण सभा बहिष्कार
एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बुधबार राष्ट्रिय सभागृहमा धुमधामका साथ एकता–सभा मनाइरहँदा पूर्वमन्त्री सुनीलबहादुर थापा भने मालीगाउँस्थित आफ्नै निवासमा निकटस्थसँग बैठक गरिरहेका थिए ।
राजतन्त्रको पक्षमा उभिँदै आएको कमल थापा नेतृत्वको पार्टीसँग एकता गर्ने पशुपति समशेरको निर्णयमाथि आपत्ति जनाउँदै सुनीलले मङ्गलबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पनि बहिस्कार गरेका थिए ।
पशुपतिसमशेर राणाको नेतृत्वले गणतन्त्र र सङ्घीयताको विरुद्धमा राजतन्त्रलाई स्वीकार गरेको हुनाले आफू एकीकरणमा सहभागी नभएको थापाको तर्क छ । सत्तामा रहेका केही नेताहरुको कमजोरीलाई देखाएर सिङ्गै व्यवस्थाको विरोध गर्न नमिल्ने थापाको मत छ ।
सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा रहेको राप्रपाले गणतन्त्र र सङ्घीयताको पक्ष लिँदै आएको थियो । सूर्यबहादुरको निधनपछि पनि राप्रपाले गणतन्त्र र सङ्घीयतासहितको संविधानलाई स्वीकार गर्दै आएको थियो ।
छोरा सुनीलले पनि ०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त परिवर्तनलाई राप्रपाले स्वीकार्नुपर्छ भनेर पार्टीभित्र वकालत गर्दै आएका थिए । अहिलेको संविधानलाई अस्थिर तुल्याउन पार्टीले आफ्नो रुप परिवर्तन गर्न नहुने थापाको मत छ । संस्थापक नेता सूर्यबहादुर थापाले लिएको राजनीतिक अडानबाट राप्रपाको नेतृत्व विचलित भएको सुनीलले आरोप लगाएका छन् ।
सानो कुरामा झगडा नगर्न लिङ्देनको सुझाव
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले नेताहरु मिल्न नसक्दा मुलुकमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता आएको जिकिर गरेका छन् ।
राप्रपा र राप्रपा संयुक्तको एकीकरण घोषणामा बोल्दै उनले नेताको स्वार्थको लडाइँले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको अन्त्य भएको बताए । ‘तपार्इंहरु नजुधेको भए, हामीलाई नजुधाएको भए, हामीलाई गाईगोरुजस्तो लुरुलुरु पछि नहिँडाएको भए यो देशमा गणतन्त्र आउँथ्यो ? सङ्घीयता आउँथ्यो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
राप्रपा फुटका कारण काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले फाइदा लिएको लिङ्देनले बताए । भर्खर बहुदल आउँदैमा पार्टी दुईचिरा भएको र त्यतिबेलादेखि नेताहरुमा चेत नआएको लिङ्देनले आरोप लगाए । ‘तपाईंहरुले आफूलाई मात्र बर्बाद गर्नुभएन, बहुदल आउँदा तपाईंहरुले काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टको विकल्प दिनुहुन्छ भनेर आशा गरेका थिए,’ उनले भने, ‘अब पनि चेत आउनुपर्दैन ?’
अहिलेको एकता राप्रपाका नेतृत्वका लागि अन्तिम अवसर भएको पनि लिङ्देनले बताए । ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति आस्था राख्ने र पार्टी बाहिर रहेर नेताहरुबाट आशा गर्नेहरुलाई धोका दिने काम नगर्नुस्,’ उनले भने ‘अब पनि धोका दिने हो भने देश र धर्मलाई धोका दिनु हो ।’
नेता लिङ्देनले अब यस्तो मौका फेरि नआउने भन्दै नेताहरुले सानो–सानो कुरामा झगडा नगर्ने र चित्त दुखाउँदैनौं भनेर प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने बताएका थिए ।